nokukurumidza yakaoma tauro
itsva harnesses & mapazi linked baratos
Real House Tende
High yepamusoro ultralight Amai akarara bhegi
Canvas akarara bhegi
nhabvu mamiriro kupikiniki bhurangeti
Hazvinei kuti tende riri isapinda haasi chete chokuita mvura zvakadini mbiru chinokosha, chinonyanya kukosha vari kugadzira uye hunoshamisa. Zvinoita nyore, asi mijenya matende kutengeswa hakusi isapinda, kunyange izvozvo anotaurwa mvura chomupepanhau 5000mm. Tatenda indoor mvura bvunzo zvokushandisa, izvo zvinoita kuti mvura chiedza taramba chero nguva, izvozvo kuchatibatsira kuwana chero usabuda mukana kuitira kuti tive kubereka wakakwana isapinda tende.
Chii yokusonesa kuvakwa wehomwe yenyu yokurara? Ndizvo zvakakodzera zvakanaka zvenyu chinangwa? Ko nokutengesa wako akakuudza iro kuvaka inoshandiswa nokuda muhombodo kurara kwako uye kuchiitwa nechimwe kuvakwa? Kazhinji, pane 2 vakasiyana zvakagadzirwa nezuva pamusika, ari H mukamuri uye kaviri H chamber.The H Chamber ndiye nyore uye nevakawanda zvikuru pakuvaka, kusona kuti goko, kuputira uye lining pamwe zvakananga. kuvaka uyu unowanzoshandiswa kuti zhizha-chitubu yokutevedzera.
Unoziva vangani akaturikidzana zvenyu kupikiniki gumbeze, chii mukati? Chii chinoratidza nomumwe akasiyana kupikiniki negumbeze? Muzvarirwo kuita seizvi. Acrylic, Polar nemvere & polyester yakadhindwa sezvo pamusoro zvinhu, Pe & aruminiyamu foil, PEVA, isapinda Oxford sezvo pasi. Chipanji & polyester faibha sezvo zvinhu pakati. Vamwe kupikiniki gumbeze chete ane 2 akaturikidzana. Unogona kuwana zvinhu zvakasiyana pamusoro pamusika, nokuti isu, hazvinakidzi dambudziko. Tinobudisa anopfuura 1.000.000 akasiyana kupikiniki magumbeze, ndiri chivimbo tine kodzero chinhu kwauri. Kuti uwane mamwe mashoko, tapota tarisa pa FAQs kana kutaura nesu.